२ मिनेट मै अनुहारको दाग हटाई छालामा चमक ल्याउने सरल उपाय ! यस्तो छ बनाउने विधि – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Tips/२ मिनेट मै अनुहारको दाग हटाई छालामा चमक ल्याउने सरल उपाय ! यस्तो छ बनाउने विधि
एजेन्सी:- तपाइंको छाला धेरैजसो सुख्खा तथा फिक्का देखिने गर्दछ । मरेको छालाको कारणले गर्दा यसो भएको हो छालालाई चम्किलो तथा नरम बनाउनको लागि तपाइंले प्राकृतिक घरेलु उपायलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ । यो बिधि धेरै नै सजिलो हुनुका साथै प्रभावकारी छ ।
१) कागती २) थोरै नुन ३) चामलको पिठो ४) मह बनाउने बिधि :पहिलो चरण : सबैभन्दा पहिला कागती लाइ दुई भागमा काट्नुहोस् । त्यसपछि आधि भाग कागतीमा थोरै नुन हाल्नुहोस् । यसलाई अनुहारमा केहि बेरसम्म दल्नुभई सफा पानीले मुख धुनुहोस ।
यस फेसपेकलाई पुरै अनुहारमा दल्नुहोस । र १५ मिनेट त्यसै छोड्नुहोस् । त्यसपछि सफा पानीले मुख धुनुहोस । र अनुहारलाई सुक्खा हुन दिनुहोस । अनुहार पुरै रुपमा सुक्खा भैसकेपछि मइस्चराइजरलाई लगाउनुहोस् । यसको परिणामस्वरूप तपाइंको अनुहार पहिलेभन्दा निकै आकर्षक देखिनेछ । –एजेन्सी